လေ့လာမှုအသစ်အရ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုပုံစံ” (၂၀၂၀) - သင့် ဦး နှောက်တွင်порно
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအမူအကျင့်စွဲပညာရှင်အချို့သည်လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအကြိမ်ရေများ၊။ " ၎င်း၏ရှည်လျားသော - winded ပညာသင်နှစ်ခေါင်းစဉ်ကိုသင်အရူးမခံပါနဲ့ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက porn လိုလားသူသုတေသီများပေါက်ဖွားစေခဲ့သည့်အဆိုးဝါးဆုံးသောဒဏ္ofာရီများထဲမှတစ်ခုကိုအားကောင်းစွာချိုးဖဲ့သည်။
လေ့လာမှုအသစ်အရအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းသူများ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲသူများသာမဟုတ်) သည်ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ရုန်းကန်နေရသောအပြုအမူများကိုမကြာခဏသဘောမတူကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သာမန်အသိစိတ်နှင့်တူသည်ဆိုပါစို့။ သို့သော်၎င်းသည်သုတေသီများကိုညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏သဘာ ၀ မကျေနပ်မှုသက်သေအထောက်အထားများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ပါo ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အားကောင်းသောချို့ယွင်းချက်ရှိသည့်မှတ်စုတစ်ခုဖန်တီးပါ (ထို့ကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်မဟုတ်ပါ) ဤတွင်ဒဏ္myာရီနောက်ကွယ်မှပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော Josh Grubbs ကသူ၏အစီအစဉ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်။
Grubbs နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အခြားအမူအကျင့်စွဲသူများရှိမရှိစစ်ဆေးရန်မေ့ခဲ့သည် လည်း သူတို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားနေသောလုပ်ရပ်အပေါ်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုတွေ့ကြုံခံစားပါ။ သူတို့၏ MI မော်ဒယ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အခြေခံယူဆချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ၎င်းတို့၏သိပ္ပံနည်းကျဓမ္မဓိivity္ဌာန်ကျမှုကိုသံသယဖြစ်စေသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ အဆုံးစွန်၏သိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်.
Bowling Green State တက္ကသိုလ်၏ Josh Grubbs (UCLA မှ Rory Reid နှင့်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကူညီခြင်း) သည်စာနယ်ဇင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေများတွင်အလွန်အမင်းအသံဖြစ်ခဲ့သည် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောရောဂါလက္ခဏာများကိုအမြဲလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသဘောမတူမှု (နှင့်ထို“ ရိပ်မိစွဲစွဲမှု” မတိုင်မီ) သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအကြောင်းအချက်များထက်ပိုမိုရှင်းပြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, Grubbs ဤသည်၌သူ၏အမြင်အကျဉ်းချုပ် ထူးခြားသော 2016 စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဆောင်းပါးညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။တစ်ဗြောင်ကျကျမုသား).
ဤသုတေသီများသည်ထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ရှိချက်များရှိသော်လည်းဤ“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာတမ်းများ၌တည်၏ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကအများအားဖြင့်အများဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့တယ် မဟုတ် သဘောမတူပေမယ့် porn အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ! နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြသည်။ သို့သျောလညျးဤသုတေသီများအကြိမ်ကြိမ်ကော်ဇောအောက်မှာဒီအဆင်မပြေတွေ့ရှိချက်သုတ်သင်။
ယင်းအစားသူတို့သည်ခေါင်းစဉ်များ၊ သတင်းဆောင်းပါးများနှင့်အားနည်းသော“ မကျေနပ်ချက်” တွေ့ရှိချက်များကိုသာအလေးပေးဖော်ပြသည့်မီဒီယာကိုးကားချက်များနှင့်အတူပြေးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောစက်ရုံသည်ကူညီရန်အလွန် ၀ မ်းသာသည် သူတို့ရဲ့အထင်အမြင်မှားစေသောတောင်းဆိုမှုများကိုထုတ်ပြန်ပါ။ (မှတ်ချက် - Grubbs နှင့်ဒုတိယစာရေးဆရာ Sam Perry တို့သည်သူတို့၏အစီအစဉ်များအပေါ်ဘက်လိုက်မှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည် နှစ်ခုလုံး တရားဝင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley ၏ဂုဏ်ယူအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့်“ RealYourBrainOnPorn.com” ဆိုဒ်).
ဝမ်းသာစရာကဤကိစ္စတွင်သိပ္ပံပညာသည်နောက်ဆုံးတွင်မိမိကိုယ်ကိုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည် ထင် ရန်) ။ “ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ အားလုံး အမူအကျင့်စွဲစွဲသူများသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း” ကိုခံစားကြသည်။ ထို့ကြောင့် Grubbs သည်နောက်ဆုံးတွင်ထင်ရှားသည် et al ကတ်ပြားတစ်အိမ်မှာသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရလဒ်မှာ MI ၏တွေ့ရှိချက်များအားလုံးသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရရှိခဲ့သည့်ဆူညံ။ လှည့်စားသောခေါင်းစီးများမဟုတ်ပါ။
ဤအတောအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ဒီသုတေသီတွေရဲ့လှည့်ဖြားတဲ့မှတ်ဥာဏ်ကသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ပညာနဲ့စိတ်ပညာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုဟာသံသယဖြစ်ဖွယ်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းစွဲခြင်းကဲ့သို့အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်ကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်း (ယခုအခါနှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုသောရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲတွင်ပြဌာန်းထားသည်) ကိုလျှော့ချလိုက်သည်။
ဝမ်းနည်းစရာမှာအခြေအမြစ်မရှိသော“ MI = ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” meme သည်ခေါင်းကိုဖြတ်တောက်ထားသော်လည်းခဏတစ်ဖြုတ်လှည့်ပတ်နေ ဦး မည် MI အယူအဆကိုထောက်ခံရန်သုတေသနပြုသူများကိုဂရုစိုက်ပါ။ ဘက်လိုက်မှုစစ်ဆေးပါ။ (ဒီဆောင်းပါးမှာနောက်ဥပမာတစ်ခုပေးပါ။ )
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ စွဲလမ်းမှုကင်းမဲ့မှု” (MI) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရှင်းပြသည့်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် MI သည်သူ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဆန့်ကျင်သောလိင်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များက Grubbs သည် MI ကိုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည် မဆင်မခြင်ရှေ့ပြေး ("ရိပ်မိစွဲ") သူ၏ CPUI-9 ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောမေးခွန်းများသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုများပြားစေသည်။ ဒီမှာ ငါ့တွစ်တာ (နှင့်ငါ့ ပိုရှည်ဆောင်းပါးCPUI-9 လေ့လာမှုအားလုံးသည်ဘက်လိုက်သောရလဒ်များကိုမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုရှင်းပြခြင်း။
အဓိကအားဖြင့် CPUI-9 မေးခွန်းလွှာသည်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုတိုင်းတာရန်တောင်းဆိုနေစဉ် စွဲ -related မေးခွန်းများကိုကပ်ခဲ့ပါဘူး, “ ရိပ်မိ” ကို“ အမှန်တကယ်” စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါစေ။ သို့သော်လူအများကမူ၎င်းသည်လုံးဝတိကျသောလှည့်ဖျားသက်တမ်းတံဆိပ်ကိုမှီခိုပြီးဟုယူဆခဲ့သည်။ရိပ်မိ စွဲ။ " (“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုသည်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်ထက်ကျော်လွန်နေသည်။ )
CPUI-9 တွင်လိမ္မာပါးနပ်စွာပါ ၀ င်သောဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းသုံးခုကိုဖော်ပြထားသည်။ သို့ဖြင့်ဂရူဘပ်၏ပုံသဏ္toာန်နှင့်အညီဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှု -
Grubbs ၏သံသယဖြစ်ဖွယ် CPUI-9 မှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း CPUI-9 သည် ခွဲခြား၍ မရပါ အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်“ ယုံကြည်မှု” တို့ဖြစ်သည်။ မည်သည့် Grubbs CPUI-9 လေ့လာမှုတွင်မဆိုဘာသာရပ်များသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” ဟုမည်သည့်အခါမျှမဖော်ပြပါ။ သူတို့ကရိုးရိုးအထက်9မေးခွန်းများကိုဖြေကြားနှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ်ရရှိခဲ့သည်။
ဤတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ပြောဆိုမှုများနှင့်သံသယရှိသောဆက်နွယ်မှုအားလုံး၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲခက်ခဲမှုမေးခွန်းများ (၇-၉) သည်ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအမှတ်ရစေပြီးလောကညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုအနိမ့်ဆုံးအမှတ်ရစေသည်။ ထို့အပြင်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” နှင့်စုစုပေါင်း CPUI-7 ရမှတ် (“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု”) အကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Grubbs ၏အကျော်ကြားဆုံးလေ့လာမှုအရမေးခွန်း ၇-၉ သည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဘာသာတရားအပေါ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအပြစ်ပုံချရန်သူ၏အစီအစဉ်ကိုအရာခပ်သိမ်းလွဲမှားစေကြောင်းဖော်ပြသည်
သင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်လျှင်အခြားသောလမ်းထားရန်, ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာကိုအကဲဖြတ်ထားတဲ့ CPUI-9 မေးခွန်းများကို 1-6 (ထံမှရလဒ်များ အမှန်တကယ် စွဲလမ်းမှုသည်ဆက်စပ်မှုများသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ရှက်ဖွယ်ရာဟုပြောသောသံသယဖြစ်ဖွယ်ဆောင်းပါးများအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဘယ်သောအခါမှရေးသားခဲ့ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်“ အစစ်အမှန်” ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသည်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုတွင်နေရာမရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခမေးခွန်းများ (၇-၉) အပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ မည်သည့် စွဲ။ တူညီတဲ့လေ့လာမှုကနေဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည် porn အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့် ဝေးနေဖြင့်အမှန်တကယ်စွဲခြင်း (မေးခွန်း ၁-၆) ကိုအကောင်းဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
မည်သူမျှပါးပျဉ်းအောက်၌ကြည့်ရှုနေသမျှကာလပတ်လုံး, Grubbs ရဲ့ "ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းရုံအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်း" အပေါ်ယံအပေါ်ယံထောက်ခံခဲ့သည်မှတ်ချက်ချ i ကိုမှတ်တမ်းတင်အဖြစ်မီဒီယာနှင့်အတူပြေးနှင့် Grubbs, မီးလျှံမီးတင်ရန်ဒီပိုရှည်ဆောင်းပါး.
နောက်ဆုံးတွင် Grubbs ကိုယ်တိုင် (သူမီးရှို့ခံခဲ့ရချိန်) အပါအ ၀ င်သုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများကိုသူတို့စွဲစွဲလမ်းသည်ဟုထင်မြင်မှုရှိမရှိနှင့် (၂) မည်မျှဘာသာရေးကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာများကို ပိုမို၍ စမ်းသပ်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ Grubbs ၏ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းသောအဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ အဆိုပါ "ရိပ်စွဲ" ဒဏ္myာရီရှုတ်ချခဲ့သည်နှင့် Grubbs ပင်စွန့်ပစ်။
2018 ခုနှစ်တွင် Grubbs, အထင်မြင်မှားစေသောတံဆိပ် ("ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု") ဖြင့်ချို့ယွင်းချက်မော်ဒယ်ထွက်ခေါ်ခံရခြင်းအားဖြင့်မသေချာမရေရာ et al အားနည်းချက်ရှိသော“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီခြင်း” သို့မဟုတ် MI ပုံစံကိုစတင်ခဲ့သည်။ “ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ပျောက်ကွယ်သွားသည့်နေရာတွင်“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု” သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းသောပြpornနာအဖြစ်ရှင်းပြရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
Grubbs et al နှင့်သူတို့၏နောက်လိုက်များအလျင်အမြန်လေ့လာမှုများထွက် pumped နှင့် သုံးသပ်ချက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်း။ Grubbs မှတွစ်တာတွင်ပြproblemsနာများသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှု၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်ခံယူချက်များသာဖြစ်သည် (Grubbs သည်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်)
Alas, အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် porn ၏အသုံးပြုမှုသည် MI နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ထူးခြားသည်ဟုသူတို့၏အခြေခံယူဆချက် (ယခုမမှန်ကန်ကြောင်းပြသခြင်း) ကိုမစစ်ဆေးဘဲထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်သူတို့၏အဆင်မပြေသောတွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းသူအဖြစ်ရှုမြင်သူများအကြားဆက်စပ်မှုရှိခြင်း (မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာ) အကြားဆက်စပ်မှုရှိခြင်းနှင့် MI အကြားဆက်စပ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းသူတစ် ဦး အကြားဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ပျက်ကွက်မှုများနှင့် Grubbs ကိုနောက်ထပ်နှစ်ခုသပိတ်မှောက်ခြင်း။
MI မော်ဒယ်ကိုယခုအခါအနီရောင်သမင်ဒရယ်အဖြစ်တွေ့မြင်ရပြီး CPUI-9 မေးခွန်းလွှာသည်ပြန်လည်ပြုပြင်။ မရသောအကန့်အသတ်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ သူတို့၏ MI / CPUI-9 လေ့လာချက်များအရအပြာစွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပြာစွဲစွဲမှုနှင့်ဘာသာရေးသို့မဟုတ် MI အကြားမရရှိနိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို porn စွဲနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ကာလ။
ဤတွင်မှအမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်အချို့ကိုဖြစ်ကြသည် လေ့လာမှုအသစ်, အ MI မော်ဒယ်အူ။
porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ (စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီ) ဝေးသောအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခန့်မှန်းခန့်မှန်း၏အများဆုံးအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
MI သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များနှင့်ကစားခြင်းများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဘာသာတရားတို့၏ဆက်စပ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ Grubbs ကိုမထောက်ခံပါ et al's ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရှင်းပြသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိသော်လည်းအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောသူများသည်အပြုအမူအား (MI) ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသဘောမကျမှုအပေါ်တွင်အနည်းငယ်မြင့်မားသည်။ ပြီးတော့ဒီလေ့လာမှု (နှင့်အခြားသူများ) က MI မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မား အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်၊ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသော“ စွဲလမ်းစေခြင်း” နှင့်ပတ်သက်သည်။fအောက်ကဇယားမှာporn အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက် ကြံ့ခိုင်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ညစ်ညမ်းစွဲ (0.42), သေးနှင့်အတူနည်းနည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ် ယာနျဘာသာတရားကို (0.03).
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု” meme-campaign သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ၎င်းကိုအချိန်အတန်ကြာရှေ့သို့ချီဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးများကိုလေ့လာသည့်ပညာရှင်များစွာသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းသောအသိပညာပေးမှု၊ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပူဖောင်းတွင်ဆက်ရှိနေမည်မှာသေချာသည်။ သူတို့ကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ရော်ဘာတံဆိပ်တုံးရလဒ်များရနိုင်သည်။ MI မော်ဒယ်လ်ကိုကတ်ပြားအိမ်တစ်လုံးပေါ်တွင် (ယခုပြိုကျသည်) အမြဲတမ်းပြသခဲ့သည်ကိုလေ့လာမှုအသစ်ကိုသတိမပြုမိပါ။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏အကျိုးအမြတ်ကိုကာကွယ်ရန်ထိုရလဒ်များကို ဆက်၍ တံပိုးခတ်လိမ့်မည်။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, စဉ်းစားပါ ဒီလေ့လာမှုအသစ် လိင်ပညာရှင်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က MI ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းဟုလူတို့ထင်မြင်ယူဆစေသည့်“ အရှက်ခွဲခြင်း” နှင့် MI ကိုချိတ်ဆက်ရန်အလွန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့၏အယူအဆမှာမအောင်မြင်ပါ၊ ဦး ခေါင်းကိုရေးသားသူ Brian A. Droubay (ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းသူ) သည်သူ၏သွားများကိုခြစ်နေသည်ကိုကြားနိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင် MI သည်“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုခံစားချက်” (အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကဲ့သို့) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သော်“ အရှက်ကွဲခြင်း” ဆက်စပ်မှုမှာအရေးမပါလှပါ။ Droubay သည်ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏ခေတ်နောက်ကျနေသောယူဆချက်ကိုယုံကြည်မည့်အစားသုံးစွဲသူများအမှန်တကယ်အစီရင်ခံသောအရာကိုဖတ်ရှုခြင်းအားအွန်လိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များတွင်အချိန်ယူသင့်သည်။
အကယ်၍ Droubay ကိုယ်တိုင်သူ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အရှက်ကွဲခဲ့လျှင်အလွန်ကံဆိုးသောအရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆန့်ကျင်သူဖြစ်လျှင်ညစ်ညမ်းသောပညာရှင်များစွာကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်သူသည်သူကိုယ်တိုင်ငြင်းခုံခြင်းမှရှောင်ထွက်သင့်သည်။ သူ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနှင့်ဘက်မလိုက်သောသုတေသနကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်စွမ်းသည်သူ၏အသံအရှိဆုံးလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်နည်းနေသကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။
Droubay နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောအရေးအသားအများဆုံးစာရေးသူ (Prause, Ley, Walton, Reid, Cantor နှင့် Grubbs နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ) ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သူတို့ဟာ“ Compulsive Sexual Behaviour Disorder” (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကချမှတ်ခဲ့သော ICD-11 ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲတွင်ရောဂါအသစ်) ဖြစ်ကြောင်းသူတို့အပြည့်အဝအသိအမှတ်မပြုကြပါ။ အတိအကျ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကိုလွှမ်းခြုံ!
စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည် (ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည်) လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်စွဲလမ်းလိုသောညွှန်ပြလိမ့်မည်။ စကားမစပ်, ဒီသုတေသီများကြောင်းမျိုးစုံဖော်ပြထားခြင်းဘူး လေ့လာမှုများကလိင်ခွဲခြားမှုကိုအသုံးမပြုဘဲအမှန်တကယ်လိင်ဆန္ဒနှင့်ခွဲခြားသည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်တူညီမှုမရှိသော်လည်းလိင်တူချစ်သူများကိုလိင်တူချစ်သူများသည်ဤသဘောတရားများကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သည်ဟုအမြဲတမ်းဟန်ဆောင်နေကြသည်။
စာရေးဆရာများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်သောခံစားမှုအကြားတွင်ဆက်စပ်မှုကိုစုဆောင်းခဲ့သော်လည်းအစီရင်ခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါထင်တာကတော့သူတို့အလေးပေးချင်တဲ့ MI ဆက်စပ်မှုထက်ပိုမိုအားကောင်းလိမ့်မယ်။ ယင်းအစားသူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းကြိမ်နှုန်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကြိမ်နှုန်းကိုအကောင်းဆုံးဟုမှတ်ယူခဲ့သည်ဟုသင်ထင်သည်မှာ…စည်းကမ်းတင်းကျပ်သည့်အတိုင်းအတာထက်“ တစ်ကိုယ်ရေလိင်ဆန္ဒ” အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြုမိသောပျက်စီးမှုပမာဏနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံ” မှတဆင့်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းကိုအများပြည်သူသိသိသာသာလမ်းလွဲစေခဲ့သည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှကင်းဝေးနိုင်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆကြလိမ့်မည်၊ နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလုံး၏အဆိုးဆုံးမှာလှည့်စားခံလိုက်ရသည်။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာတကယ့်လက်တွေ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ရောဂါမဖြစ်နိူင်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလက်ရှိအကဲဖြတ်မှုတွေနဲ့အတူစနစ်တကျအကဲဖြတ်ဖို့မနှောင့်နှေးကြပါ။
ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်သောမည်သည့်အရာကိုမဆို MI ကပြောပြသည်ဟူသောဒဏ္outာရီကိုဖယ်ထုတ်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ porn စွဲလမ်းမှုသည်ကစားနည်းနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့ပင်တကယ့်ကိုအန္တရာယ်ရှိသည်။ မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမဆိုသုတေသနပြုခြင်းကိုမည်မျှကျွမ်းကျင်စွာအများပြည်သူသို့ရောင်းချသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ကျွမ်းကျင်စွာအရှက်ကွဲခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
MI ဒဏ္thာရီဆိုတာဝါဒဖြန့်တာထက်မပိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်သွားကြဖို့အချိန်။
“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြ:နာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis နှင့်အတူပေါင်းစည်းထားသောပုံစံ” (၂၀၁၈) ၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုများ (သုတေသီများမှ)
ဘရိုင်ယန်ဂျေ Willoughby အားဖြင့်, Porn Box ကို (2018) တွင်သောင်တင်
နောက်ဆုံးတွင်ဂရော့ဘ်၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့၊ သူ၏“ Moral Incongruence” မော်ဒယ်၏အလောင်းသို့ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းကိုသီအိုရီတစ်ခုအနေနှင့်ကောင်းစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်းကစားရာတွင်“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု” ကိုကစားရန်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ကိုက်ညီသောသီအိုရီတစ်ခုကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာဖွေရမည်နည်း။